पत्रपत्रिका Archives - Pathibhara Channel
मिर्गौला फेल हुने कारण, लक्षण र उपचार…..
प्रा. डा. दिव्यासिंह शाह, मिर्गौला रोग विशेषज्ञ, त्रिवि शिक्षण अस्पताल मिर्गौला रोग विभिन्न कारणबाट हुन्छ । यो सबै उमेर समूहकालाई हुने रोग हो। नेपालमा पछिल्लो समय मिर्गौला सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीको संख्या बढिरहेको छ। राज्यले पछिल्लो समय मिर्गौलाको उपचारमा राम्रो सहयोगको व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि मिर्गौला सम्बन्धी समस्या भएका...
तौल घटाउने २५ तरिका….
१. धैर्य गर्नुहोस्– तपाईंको तौल एक दुई दिन या महिना दिनको परिणाम होइन, यो त लामो समयदेखि चल्दै आइरहेको तपाईंको जीवनशैलीको नतिजा हो । यदि तौल कम गर्नु छ भने धैर्य गर्नुहोस् । बेन्जामिन फ्र्यांकलिनले भनेका छन्, ‘जोसंग धैर्य हुन्छ, चाहेको कुरा पाउन सक्छ’ । तौल घटाउन पनि समय...
युरिक एसिड हुने कारण र बच्ने ८ उपाय…..
डा. विनय रेग्मी युरिक एसिड रगतमा नभई नहुने महत्वपूर्ण तत्व हो। यसले शरीरमा ‘एन्टी अक्सिडेन्ट’को काम गर्छ। तर, युरिक एसिडको मात्रा चाहिनेभन्दा बढी भएमा यसले जोर्नीहरुमा समस्या ल्याउँछ र ‘गाउट’ भन्ने रोग लाग्छ। युरिक एसिडलाई एक प्रकारको बाथरोगका रुपमा बुझ्न सकिन्छ। यसले जोर्नीहरुमा अत्याधिक दुखाइ गराउँछ। रगतमा युरिक एसिड...
दहीका २० फाइदा…..
अपच हट्छ दहीमा भुटेको जिरा पिसेर त्यसमा अलिकति नुन र मरिच हालेर बिहान खाएमा खाना राम्रोसँग पच्छ । टाउको दुखाइ हटाउँछ बिहान सूर्योदयसँगै टाउको दुखाइ बढ्दै जाने समस्या छ भने सूर्योदयअघि दहीसँग भात मुछेर खाने गरेमा टाउको दुखाइ कम हुन्छ । वजन घटाउँछ पेटमा बोसोको मात्रा निरन्तर बढ्दै गएको...
धेरैजसोले भन्ने गर्छन्, यौनमा सन्तुष्ट पाइएन । कतिले ‘सिघ्रस्खलनको समस्या भएको’ बताउँछन् । कोहि गुनासो गर्छन्, ‘मेरो पार्टनरलाई यौन सम्पर्कमा रुची भएन ।’ कसैलाई लिंग सानो भयो भन्ने भ्रम त कसैलाई योनीद्वार खुकुलो भयो भन्ने पीर । दम्पतीको यौन जीवनमा यस्ता अनेकन गुनासोहरु सुनिन्छ । भनिन्छ, दम्पतीबीचको कलह...
कुन महिना जन्मिने व्यक्ति कति धन कमाउछन् ? जानकारी लिनुहोस…..
ग्रह, नक्षत्र, बार, तिथिहरुको आधारमा मानिसहरुको भविष्यको फल बनाइन्छ । यसमा महिनाको पनि निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । १. बैशाख महिनाः बैशाख महिनामा उत्पन्न हुने मानिस भोगी (सर्वसुखयुक्त), धनवान, राम्रो चित्त र बिचार भएका, क्रोधवान, सुन्दर आँखा भएका, रुपवान, स्त्रीहरुलाई माया गर्ने स्वभावका हुन्छन् । २. जेठ महिनाः...
कस्ता व्यक्ति खुसी ? यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ खुसी र सुखी जीवन…
हामी दिनमा धेरैजसो खुसी हुन्छौ कि दुखी ? कामको चाप, महत्वकांक्षा, प्रतिस्पर्धा, समस्या, पीडा, तनाव जस्ता कुराले हामीलाई दुखी तुल्याइरहेको हुन्छ । चाहेर पनि हामी खुसी हुन सकिरहेका हुँदैनौ । खुसी आफैमा दुर्लभ वा महंगो चिज होइन । यो प्रकृतिले दिएको निशुल्क उपहार हो । तर, यति सजिलै र...
चाणक्य वचनः प्रेमको मामलामा सधैं सफल हुन्छन् यी चार पुरुष….
ब्रेकअफको सिलसिला आजकल धेरै सामान्य भइसकेको छ । तपाईकै सार्थी सर्कलमा धेरै त्यस्ता व्यक्ति होलन्, जसको एक वा एकभन्दा बढीसँग ब्रेकअफ भएको होस् । गर्लफ्रेन्ड–ब्वाईफ्रेण्डको ब्रेकअफ हुनु त सामान्य नै हो । किनकी यसमा कुनै बाचा–बन्धन या समर्पण हुँदैन् । तर विवाहजस्तो मजबूत सम्बन्ध पनि छिनभरमै टुट्न लागेका छन्...
सेक्स गर्दा १ मिनेट पनि टिक्न सक्नुहुन्न भने अपनाउनुहोस घरेलु उपाय…..
कतिपय मानिसहरु आफ्नो बैवाहिक जीवन खुसियाली बनाउनको लागि बजारमा पाइने अनेक किसिमका सेक्स सम्बन्धि औषधिहरु प्रयोग गर्ने गर्छन। यस्ता औषधिहरुले शरीरलाई नोक्सान पुर्यारहेका हुन्छन। यदि तपाईं योन क्रियाकलापमा आफुलाई कमजोर महशुस गर्नुभएको छ भने यो घरेलु उपाय अपनाउनुभयो भने तपाईंको समस्या हटेर जानेछ। आयुर्वेदमा प्याजका कयौं फाइदाहरु बताइएको छ...
फिल्मको सेटमा यसरी शाहरुख र गौरीले मनाएका थिए सुहागरात !
शाहरुख खानले बलिउडमा २५ वर्ष बिताइसकेका छन् । उनको गौरी खानसँग बिहे भएको पनि यति नै अवधि बितेको छ । हालै एक अन्तरवार्तामा शाहरुख खानले आफ्नो बिहे र पत्नी गौरीको विषयमा केही रोचक कुराहरु बताए । शाहरुखका अनुसार उनीहरुको सुहागरात फिल्मको सेटमा बितेको थियो । उनले भने, ‘जुन दिन...
12…5Newer →